जाजरकोटका मतदाता भन्छन्- काँग्रेस विना विकास हुदैन – Rara Khabar
जाजरकोटका मतदाता भन्छन्- काँग्रेस विना विकास हुदैन
जाजरकोट २८, कार्तिक
नेपाली काँग्रेस जाजरकोटले क्षेत्र नं. १ र २ मा घरदैलो अभियानलाई तिव्र पारेको छ । आगामि मंसिर १० गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि काँग्रेसका प्रतिनिधि सभाका उम्मेद्वार राजीव विक्रम शाह, क्षेत्र नं. १ (क) बाट प्रदेश सभाका उम्मेद्वार बेदराज सिंह, २ (ख) का दिपक जंग शाह यतीबेला मतदाताको घरदैलोमा पुगेर मत माग्न व्यस्थ रहनु भएको छ ।
घरदैलो अभियानका क्रममा दुर्गम गाउँ पुगेका उम्मेद्धारलाई जनताले नेपाली काँग्रेसले जिल्लाको विकास गर्न सक्ने भएकाले यस पटक नेपाली काँग्रेसलाई बिजय गराउने बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाका उम्मेद्वार राजीव विक्रम शाहले काँग्रेसलाई बिजय गराई सुन्दर, शान्त र समृद्धि जाजरकोट निर्माण गर्ने जिम्मेवारी दिन अनुरोध गर्नु भएको छ । शाहले जाजरकोटको समस्यालाई संसदमा बिजय पछि समाधानका लागि विशेष योजनाका साथ अघि बढाउने बताउनु भएको छ । शाहले जाजरकोटमा आफुले अबसर लिनलाई नभइ जनतालाई अबसर दिन र सेवा गर्न आएको बताउनु भएको छ । म जनताको दुः ख देखेर साथ दिन आएको पनि बताउनु भयो । म सांसद भएर पैसा कमाउने र काठमान्डौंमा घर बनाउनु छैन, जाजरकोटको मुहाँर फेर्ने मेरो सपना छ, शाहले भन्नु भयो । एमाले माओबादीको गठबन्धन सत्ता प्राप्तीका लागि मात्र भएको भन्दै आफ्नो गठबन्धन जाजरकोटी जनताका लागि भएको पनि बताउनु भयो । शाहले नलगाड, बारेकोट, कुशे तथा भेरी नगरको घरदैलो अभियान सकाएर यतिबेला शिबालय, छेडागाड, जुँनी चाँदे गाउपालिको दुर्गम बस्तीमा पुगेर घरदैलो अभियानमा थाल्नु भएको छ ।
त्यस्तै घरदैलो अभियानका क्रममा मतदातासँग भेट गर्दै नेपाली काँग्रेसबाट क्षेत्र नं. (ख) बाट प्रदेश सभाका उम्मेद्वार दिपक जंग शाहले यस पटक पश्चिमका जनताले नेपाली काँग्रेसको चुनाव चिन्ह रुखमा मतदान गरी काँगे्रसलाई विजय गराउन अनुरोध गर्नु भएको छ । शाहले पश्चिम क्षेत्र विकासको दृष्टिकोणले पछि परेकाले विजय भए पछि सबै भन्दा पहिला विकट गाउँमा सडक, पुल, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, बालविवाह, छाउपडि प्रथाको अन्त्य लगाएत काममा जोड दिइ विकासको मुलधारमा ल्याउने बताउनुभयो । जनताको सेवा गर्ने अवसर दिन मतदाताहरुसँग अनुरोध पनि गर्नु भएको छ शाहले । उता प्रदेशसभा क्षेत्र १ (क) का उम्मेद्धार तथा युवा नेता बेदराज सिंहले आफ्नो लडाइ भनेको जाजरकोटको विकास तथा लोकतन्त्र रक्षाका लागि भएको बताउनु भएको छ । १ नम्बर क्षेत्रमा विकासका लागि थुप्रै चुनौती र अबसर दुबै रहेको भन्दै यसका लागि आफु डटेरै लाग्ने नेता सिंहको भनाइ छ । ४१० मेघावाट नलसिंहगाड जलविद्युत आयोजना निर्माणमा पनि बिशेष जोड दिनुका साथै पर्ययटन, कृषि, पुशुपालन, मौरी पालन, सडक, विद्युत, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा लगाएतका क्षेत्रमा जोड दिने नेता सिंहको भनाइ छ । घरदैलो अभियान कार्यक्रममा काँग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरु सक्रिय भएर लागेका छन् ।
प्रकाशित मितिः २७ कार्तिक २०७४, सोमबार २१:१५